MIBVUNZO-NINGBO CHEM-PLUS & JW FILM
Auto Paint Kudzivirira Firimu
Auto Window Tint Firimu
Chivakwa / pekugara Firimu
Car Kuputira Vinyl Firimu
PPF Zvimwe Zvigadzirwa
Paint Kudzivirirwa Firimu FAQs
Ndinogona here kukisa mota yangu pamberi peKPAL Paint Dziviriro Firimu kumisikidzwa?
Zvinokurudzirwa kuti usashandise wakisi kana chero kupfeka kumotokari usati waisa pendi yekudzivirira firimu. Chero wakisi kana kupfeka zvinokanganisa kubatana kwakakodzera kweiyo firimu kumotokari.
Ungamonera sei mupendero nekona nenzira kwayo?
Chikamu chekuputira kumucheto chinoda kucheneswa nemvura yakachena, uye ndokuzoomeswa nepfuti yekubheka kana mweya wepanyama, kuti igone kugadzikana uye kukwana zvakakwana. KPAL yekumisikidza gel inokurudzirwa kuitira nyore kuchenesa.
Ungachengeta sei zvigadzirwa zvasara mushure mekushandisa?
Mushure mekucheka iyo firimu, iyo yasara inofanira kukomberedzwa kuitira kuchengetwa. PPF ine kuburitsa firimu inofanira kutenderedzwa zvine mutsindo, uye PPF isina kuburitsa firimu inofanira kubviswa yakasununguka. Kana iyo firimu rekuburitsa riri pachena rikabviswa, iyo firimu pamusoro ichave isina kuenzana, makomba madiki zvichingodaro.
Hwindo Firimu FAQs
Ndeipi nzira yekushandisa yatinoshandisa pane ino firimu?
Iyi firimu inofanira kuiswa munzvimbo yakanyorova. Isu tinofanirwa kuchenesa pamusoro zvakakwana uye pamusoro haina mafuta, girisi, wakisi kana zvimwe zvinosvibisa usati waiswa.
Iyo firimu inokanganisa chiratidzo mumotokari here?
Kwete. Mushure mekuvandudzwa kwetekinoroji yekugadzira firimu tekinoroji, iro razvino firimu rewindo harine simba pane chiratidzo mumotokari.
Iyo firimu rewindo rinogara kwenguva yakareba sei?
Mazhinji mota yemawindo firimu anogona kuve nemakore 3-5 kunze, zvinoenderana nemhando yacho. Kune yakajairwa yekuvaka yekushongedza firimu, inogona kugara ingangoita makore 4-5. Uye pakuvaka firimu rekuchengetedza, rinogona kugara kwenguva refu.
Kuputira Vinyl Firimu FAQs
Ndezvipi zvakanakira kuputira mota?
Mota inoputira vinyl inogona kubviswa zviri nyore kuitira kuti kana iwe uchida kutengesa mota yako unogona kungoidzoreredza kune yayo yekutanga vara pasina kurasikirwa kukosha. Chikonzero chikuru nei vanhu vakaputirwa mota dzavo ndechekuti vangangoda kuchengeta mota yavo asi vachida rumwe ruvara.
Ko kuputira mota kuchakuvadza mota here?
Kuisa nyanzvi yekumonera firimu kumotokari yako hakuzokanganisa pendi yako. Nekudaro Kana iwe uchitova nematombo machira, abrasions kana ngura zvigamba pane ako pendi zvakakosha kuti urangarire kuti kana vinyl yabviswa inogona kukwevera yakasununguka pendi nayo.
Ini ndinochengeta sei yangu vinyl yekuputira?
Kuchengeta kwakakodzera kunotanga nezvakakosha. Kuchengeta nzvimbo yemotokari yako yakachena ndiko kunonyanya kunetsekana, saka kuwacha mawoko kakawanda kubvisa zvakasvibisa pamusoro kunokosha kana iwe uchida kuchengetedza kuputira kwako kuti kusasvibiswe kana kukuvara kubva mumugwagwa wakashata.
HOME Products KPAL sevhisi nhau CONTACT
Wedzera: Kamuri 516, 5 / F, No. 1 Kuvaka, 818 Jinyuan Road, Yinzhou, Ningbo, Zhejiang, China.